ဖြန့်ဝေခြင်း - Linux မှ Linux မှ (စာမျက်နှာ 3)
Ubuntu 18.04.1 LTS RC ပုံရိပ်တွေကိုအများပြည်သူသုံးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
Ubuntu 18.04 LTS အတွက်ပထမဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံမှုယခုရရှိပြီ၊ ယခု Ubuntu 18.04.1 LTS ကိုစမ်းကြည့်ပါ
ReactOS ဗားရှင်းအသစ်ကိုဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ReactOS 0.4.9 နှင့်အတူပါရှိသည့်သတင်းများနှင့်တိုးတက်မှုအားလုံးကိုသိရှိနိုင်သည်
Ubuntu 17.10 သည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်နောက်ထပ် update များမရှိတော့ပါ။ Ubuntu 18.04 LTS သို့ update လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။
Peppermint OS9- cloud အခြေခံ application များသို့ ဦး တည်သည့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း
Peppermint OS သည်ပေါ့ပါးသော Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Mozilla ၏ Prism နည်းပညာကို အခြေခံ၍ cloud စနစ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၄။ သင်စိတ်ကြိုက်ခေါင်းစဉ်များဖွင့်ရန် Linux ဖြန့်ချိခြင်း
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အပေါ်ကစားနိုင်စေရန်အကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ချိမှုအချို့ကိုသင်နှင့်မျှဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခုလတွင် openSUSE Tumbleweed ကိုတိုးတက်မှုများစွာပါ ၀ င်ရန်ကိုးဆအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
OpenMandriva Lx3သည်နောက်ထပ်အဓိကဗားရှင်းမတိုင်မီကြီးမားသော update တစ်ခုရရှိသည်
OpenMandriva Lx4မရောက်မီ OpenMandriva Lx3သုံးစွဲသူများသည်တိုးတက်မှုများစွာနှင့်အတူမွမ်းမံမှုတစ်ခုရရှိသည်
Infographic: ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသော Ubuntu ကိုအသုံးပြုသည်
Ubuntu သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကုမ္ပဏီများနှင့် developer များကမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပြသနိုင်သည့် Canonical တစ်ခုကသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဝိုင် ၃.၁၂ သည်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်တရားဝင်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
Wine စီမံကိန်းကိုတီထွင်သူများသည် Unix စနစ်များရှိဇာတိ ၀ င်းဒိုးဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်ထင်ရှားသောလိုက်ဖက်သည့်အလွှာပုံစံအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကပင် Recalbox ဗားရှင်း ၁၈.၀၆.၂၇ ကို၎င်း၏တရားဝင်ဘလော့ဂ်တွင်ကြေငြာခြင်းဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
SUSE Linux သည် EQT Partners ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူများအတွက်ဘာမှပြောင်းလဲမည်မဟုတ်
Linux Mint 19 Tara ကို Cinnamon, Mate နှင့် XFCE တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
ကွဲပြားသောဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်သုံးခုဖြင့်ရရှိနိုင်သော Linux Mint 19 Tara အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်
Raspbian အသစ် update ကိုယခု download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
ဒီ update အသစ်ကိုလူသိရှင်ကြားကြေငြာလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အမှားပြင်ဆင်မှုများများစွာပါ ၀ င်သည်။ Raspbian သည်တရားဝင်စနစ်ဖြစ်သည်
PureOS - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတစ်ခုတည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဖြန့်ဖြူးခြင်း
PureOS သည်အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုသီးသန့်အသုံးပြုသောခေတ်မီ။ သုံးစွဲရလွယ်ကူသည့် Debian အခြေပြုဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်
သင်၏ Raspberry Pi အတွက်အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုစနစ်များ
လူတိုင်းကလူကြိုက်မများဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီနေ့မင်းရဲ့ Raspberry Pi အတွက်လက်ရှိဖြန့်ချိမှုအချို့ကိုငါတို့ပြတော့မယ်။
Ubuntu ၏အချက်အလက်များအရ Ubuntu ကိုကမ္ဘာအနှံ့တွင်အသုံးပြုသည်။ 18.04 LTS Bionic Beaver
Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver Installation တွင်စုဆောင်းရရှိသောအချက်အလက်များစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါမည်
Debian Team သည် Debian 10 Buster အတွက်ပါရမီရှင်အနုပညာရှင်များကိုရှာဖွေသည်
အကယ်၍ သင်သည်ထူးချွန်သောအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏အလုပ်ကိုကမ္ဘာကြီးအားပြရန်အချိန်တန်ပါပြီ၊ Debian 10 Buster developer များကသင့်အားရှာဖွေနေပါသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကတည်ငြိမ်သော Devuan version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ဗားရှင်း 2.0 သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ... ပြီးနောက်အမည်ပေးထားသည့် ASCII ကုဒ်ကို ...
MX-Linux သည်ခေတ်မီဆန်းပြားပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် desktop ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ရိုးရှင်းပြီးတည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊
openSUSE Tumbleweed ကို Linux Kernel 4.17 နှင့် KDE 5.13 နှင့်မွမ်းမံသည်
openSUSE Tumbleweed သည် kernel အသစ်နှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရရှိသည်
Ubuntu 18.04 LTS သုံးစွဲသူများသည် Mesa 18.1.1 ကိုယခုထည့်သွင်းနိုင်သည်
ယခုသင်သည်သင်၏ system ပေါ်တွင် Mesa 18.1.1 ဂရပ်ဖစ် suite version အသစ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
GeckoLinux ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံး version ကို openSUSE Leap 15 ကိုအခြေခံပါတယ်
OpenSUSE Leap 15 ကိုအခြေခံပြီးပထမဆုံး GeckoLinux ဗားရှင်းအသေးစိတ်ကိုပြောပြပါမယ်
Linux kernel 3.2 ကိုဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်စီးရီး၏နောက်ဆုံး update ဖြစ်ဟန်ရှိသည်၊ အသစ်ပြောင်းရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
Fedora 26 သည်၎င်း၏ဘဝသံသရာကိုမကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံတော့မည်မဟုတ်ပါ၊ ဤစနစ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုယခု update လုပ်ပါ
LinuxConsole - ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို ဦး စားပေးဖြန့်ဖြူးခြင်း
LinuxConsole သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ကလေးများနှင့်ကွန်ပျူတာအဟောင်းများကိုအဓိကထားသောကျယ်ပြန့်သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းထားသော Linux ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ LinuxConsole သည်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အသစ်နှင့်အဟောင်းများစွာကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
Debie 8 ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများအားနှုတ်ဆက်တော့မည်။ LTS ဗားရှင်းအတွက်အသေးစိတ်နှင့်ရက်စွဲများကိုသိပြီ
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish ကိုအောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်မည်
ကွဲပြားခြားနားသော Ubuntu 18.10 ကိုထုတ်လုပ်မည့်နေ့ရက်ကိုကြေငြာပြီးဖြစ်သည်
Voyager 18.04 GS LTS ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်
မနေ့က Voyager Gamers ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြင်သစ်အသုံးပြုသူမှ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ပြင်သစ်အသုံးပြုသူဖန်တီးထားသော Xubuntu စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤအလွှာကိုဝေမျှရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ အခြားသူများနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်၏။
Q4OS - အနိမ့်ရင်းမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု Windows XP နှင့်တူသည်
Q4OS သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သော Debian အခြေပြုဂျာမန် Linux ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows XP နှင့် Windows နှင့်ဆင်တူသည်။ TDE Trinity Desktop Environment ဟုလည်းခေါ်သည်။7တိုက်ရိုက်။
RoboLinux 9.2 ဗားရှင်းသစ်ကိုယခုရရှိနိုင်သည်
RoboLinux တွင်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းတွင်စနစ်အတွင်းရှိ Windows application များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုရန်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့် virtual machine ဖြစ်သော "StealthVM" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ခံတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အား Windows ၏ edition များကို virtualize ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Fedora 28 ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်
မနေ့က Fedora ဗားရှင်းကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ Fedora 28 သို့ရောက်ရှိလာပြီးဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် Linux ဖြန့်ချိမှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Fedora သည်ခိုင်မာပြီးခိုင်မာသည့် Linux ဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုနေရာချခြင်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်
ဒီနေ့မှာတော့အသစ်စက်စက်ဖြစ်တဲ့အသစ်စက်စက် Linux distro ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်။ MagpieOS သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူငယ်တစ် ဦး မှဖန်တီးသော Linux ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုယ်ပိုင် Linux ဖြန့်ချိမှုကိုဖန်တီးရန်ရိုးရှင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ hard drives တွေကို Clone လုပ်နိုင်မယ့် tool Clonezilla 2.5.5-38 Stable ကိုအခုရပြီ
Clonezilla သည် Norton Ghost နှင့်ဆင်တူသော software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဤ Clonezilla နှင့်မတူဘဲ Partition Image ကဲ့သို့သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများအပေါ်အခြေခံသောကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည် - live image နှင့် server edition ဖြစ်သည်။
GNOME 3.28 သည်ပထမဆုံး Point Release ကိုရရှိသည်
ကျော်ကြားသောဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း GNOME 3.28 သည်၎င်း၏ပထမဆုံးထုတ်လွှတ်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတရားဝင် repositories ထဲသို့ ၀ င်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
Ubuntu 18.04 LTS သည်အသုံးပြုသူများကိုပုံမှန်နှင့်အနည်းဆုံးတပ်ဆင်မှုများအကြားရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်
Ubuntu 18.04 LTS တပ်ဆင်ခြင်းမျက်နှာပြင်မှယခုသင်အနည်းငယ်သာတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်သာမန်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
Linux Mint ၏မူကွဲအားလုံး၏ရန်ပုံငွေမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း
ကျွန်ုပ်သည် Linux Mint အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယခင် distro ဗားရှင်းများတွင်သူတို့ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းသတိရမိသည်။
နေရာတိုင်း၊ အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကဲ့သို့ပင်မည်သည့်အရာကမှပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာ Gentoo ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းရံထားသည့်ဒဏ္someာရီအချို့ကိုပြသပါမည်။
ISO သည် installation ၏ကန ဦး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် Gentoo ၌မည်သို့စတင်ခဲ့သည်ကိုသင်အနည်းငယ်ပြောပြရန်အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါ။
Kernel သည် Linux ဖြန့်ဝေမှုတိုင်း၏စိတ်နှလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးကိုသင်လည်ပတ်သောဆော့ဝဲလ်နှင့်ဆက်သွယ်သောကြောင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Voyager 16.04.3: Xubuntu ကိုအခြေခံပြီးပေါ့ပါးပြီးလှပသော distro
Linux အခြေပြု distros များ၏လှပမှုနှင့်ပေါ့ပါးမှုသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေပြီးအချိန်ကုန်သွားပြီ။
Debian9သည်တိုးတက်မှုများနှင့်ပြုပြင်မှုများများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည် Debian ကိုအခြေခံထားသော distros များ ...
ငါ Linux Mint ကိုခစျြတာပါပဲ၊
antiX နှင့် MEPIS အသိုင်းအဝိုင်းအဟောင်းမှအလွန်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် MX Linux https://mxlinux.org/ ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။
Linux Mint 18.1 "Serena" ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
ပြီးခဲ့သည့် Linux Mint ဗားရှင်းကဲ့သို့ပင်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Linux Mint 18.1 "Serena" ကိုစင်ကြယ်စွာတပ်ဆင်ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Trisquel GNU / Linux 8.0 « Flidas »၏ Alpha version ကိုရနိုင်သည်။
Ubuntu ကိုအခြေခံသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း Trisquel ကိုလူအများသိကြလိမ့်မည်။ Free Software Foundation သည် ၁၀၀% အခမဲ့အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
SUSE Linux Enterprise 12 SP2 ရရှိနိုင်
SUSECON 2016 Enterprise ၏ SUSE Linux Enterprise မှဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည့် SUSECON XNUMX streaming ကိုဝမ်းမြောက်စွာတွေ့နိုင်သည်။
Linux Kernel 2016.11.01 နှင့်အတူ Arch Linux 4.8.6 ရရှိနိုင်ပါ
softpedia မှတစ်ဆင့် Arch Linux 2016.11.01 ဗားရှင်းကိုယခုဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် ...
Bodhi Linux 4.0.0 ရရှိနိုင်: Ubuntu အခြေခံပေါ့ပါးသော distro
မနေ့ကကတည်းက Bodhi Linux ဗားရှင်း ၄.၀.4.0.0 ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သည်။
ယနေ့ငါ Linux Mint 18 "Sarah" ကို Cinnamon desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်၊ ပထမတစ်ချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
ဒီနေ့ openSUSE Tumbleweed Snapshots အသစ် (မနေ့ကမှ) ရရှိနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုယနေ့ငါနိုးထခဲ့သည်။
Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn အသစ်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်သင်လုပ်သင့်သည်မှာအချို့အချက်များဖြစ်သည်။
ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဟုပြောရမည် ရက်အနည်းငယ်အကြာ, Plasma Phone စီမံကိန်းနှင့်အတူ Plasma Mobile ၏တိုးတက်မှုကိုမြင်လျှင်ငါမှတ်ချက်ပေး ...
Ubuntu 14.10 နှင့်မိသားစုကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဘာအသစ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
Linux Semplice - Crunchbang အတွက်အစားထိုးခြင်းလား။
ငါသည်အနည်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားသည်၊ သို့မဟုတ်မဟုတ်ပါကပုံမှန်အားဖြင့် Window Managers အတွက် ...
Ubuntu 15.04 Vivid Vermet, ဘာတွေမျှော်လင့်ရမလဲ။
Ubuntu ဗားရှင်းအသစ်စတင်ခြင်းသည်လာမည့် ၂၀၁၅ Aprilပြီလတွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သကဲ့သို့ ...
ယခုတွင်သင်၏ web browser မှ Ubuntu ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်
Canonical သည်ကျော်ကြားသော Ubuntu Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုပိုမိုနီးကပ်စွာအတွေ့အကြုံပေးလိုသောကြောင့်ဤကုမ္ပဏီသည် ...
Antergos သည် KDE ၏အသွင်အပြင်ကိုဂရုစိုက်ပြီးဖြစ်သည်
ငါဖြန့်ဖြူးမှုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ Archlinux ကို ၂ နှစ်ကျော်သုံးပြီး Antergos နဲ့အတူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ ...
ရရှိနိုင် Manjaro 0.8.13 ..
Manjaro ဗားရှင်း 0.8.13 ကိုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဒီနေ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့သတင်းအချို့ကိုပြသပါ။
Elementary OS Freya နှင့် Antergos 2015.04 တို့၏သေးငယ်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှု
Apricity OS သည်၎င်း၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းတွင်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် baticity အဆင့်တွင် Apricity OS ၏တိုးတက်လာသောနှင့်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသောအရာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အဘို့…
Developers များအတွက် ChayuOS နှင့်အစားထိုး NayuOS
ဆော့ဝဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလွှမ်းခြုံရန်ရှာသော Nexedi (software development company) တွင်လုပ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုတွင် Nayu OS ...
Solus Daily စစ်ဆေးခြင်း [Mini Review] - 0.201528.6.0
SolusOS အသစ်ပြန်ပေါ်လာပြီ။ ငါ Budgie အကြောင်းကြားသောအခါငါထင်: "အခြားတ ဦး တည်း ... အဘယျသို့အဘို့?" .. အထူးသဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစား ...
သေခြင်းမှထမြောက်ပါ - LMDE2သစ်ကြံပိုးနှင့် LMDE2မိတ်
LMDE (Linux Mint Debian Edition) ကိုပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့တဲ့အချိန်၊ ငါက Debian အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး…
ဤအခွင့်အလမ်းအတွက်ငါတို့အားမကြာသေးမီကအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လိုင်းတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော distro တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်သည်။
[ပြန်လည်သုံးသပ်] Nitrux 7.15 ရရှိနိုင်
ဂူဂဲလ် + မှ Nitrux 7.15 ကိုယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပြီ (သူကိုယ်တိုင်ရေးသားသူ Uri Herrera မှ) ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ့မှာရှိတယ် ...
Ubuntu အေဒီ - ဘာသာရေးအတွက်ဖြန့်ဝေခြင်း
Ubuntu CE သည် Ubuntu ကို အခြေခံ၍ ဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်မှုရှိသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် Tails 2.5 ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် bug fix version ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ...
တည်ငြိမ်သောအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ KDE Neon, Plasma 5.7
Linux distros တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည့် KDE desktop ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ အတွက် ...
သင့်အိမ်၌ firewall, IDS, Cloud, Mail (နှင့်ထွက်သမျှ)
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များတွင်တွေ့ရသကဲ့သို့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဆာဗာများ၊ ကွန်ရက်များနှင့်အခြားအရာများအကြောင်းပြောဆိုသွားမည်။ စတင်ရန်…
Fedora မှာအသစ်က ၂၄
ကျွန်ုပ်တို့မှာ Fedora 24 ရှိတယ်၊ ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်…
AmayaOS သည်အလွန်ထူးခြားသော Operating System ဖြစ်သည်
AmayaOS သည်နှိုင်းယှဉ်ချက်အသစ် Operating System, UNIX အမျိုးအစားနှင့် GNU GPL v100 လိုင်စင်ဖြင့် ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သည်။
Linux Mint 18, beta အဆင့်တွင် MATE ထုတ်ဝေမှု
သင့်အတွက် Linux Mint 18 (သို့) Linux Mint 18 "Sarah" MATE ထုတ်ဝေမှုကိုဤ distro ၏မူကွဲအသစ်ကိုတင်ပြသည်။
Manjaro Linux ထုတ်ဝေမှု 16.06
Manjaro distro ဗားရှင်းသစ်ကို ၁၆ ဒသမ ၆၀ တွင်တည်ငြိမ်သော version အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Daniella ဟုခေါ်သည်။ TO …
Chrome OS သည် Android အက်ပလီကေးရှင်းများကို Chromebook များပေါ်တွင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်
ယခုအချို့ Chromebook များပေါ်တွင် Android application များကို download လုပ်ယူနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ယခုအပလီကေးရှင်းအချို့သည် Chromebook များပေါ်တွင် executable ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးတော့ Bodhi distro ဖြင့်ထားပါ
NixOS 16.03 ကိုကြည့်ပါ
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့, လွတ်လပ်သောမူရင်းဒီ distro ၏ဗားရှင်း 16.03, နယ်သာလန်မှတိုက်ရိုက်ရရှိနိုင် ...
အကယ်၍ သင်သည် Linux kernel အတွက်လုံခြုံရေး updates များကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားပြီး၊
Apricity OS, ကြော့ရှင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် distro
Apricity OS ကိုအလွန်ခေတ်မီ။ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော operating system အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပြီး Cloud service များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုရှိသည်။
သင်၏အများသုံး IP ကို ​​terminal မှသိပါ
ရိုးရှင်းသောအနည်းဆုံးလုပ်နည်းလုပ်နည်း Linux ကိုသင်၏အများသုံးအိုင်ပီကိုမည်သို့သိနိုင်မည်၊ မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။ browser သို့မသွားဘဲ ...
RaspEX: နောက်ပြန်လိုက်ဖက်တဲ့ Raspberry Pi3အတွက် Layout
Raspberry ကိုအသုံးပြုလိုသူများသို့မဟုတ် Raspberries ကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီ Mini Computer အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော RaspEX ကိုတင်ပြပြီး ...
Canaima GNU / Linux 5.0 အတွက်သိကောင်းစရာများ
Windows တွင် Ubuntu၊ Canonical နှင့် Microsoft တို့၏မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်း
ငါတို့ရှိသမျှသည် desktop ကွန်ပျူတာဈေးကွက်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသော«ငွေပေးချေမှု»လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Windows နှင့် ...
Ubuntu တွင်တွေ့ရှိရသောအားနည်းချက်အသစ် ၇ ခုကို Canonical ကဖြေရှင်းသည်
Canonical သည် Ubuntu စနစ်အတွင်းရှိအမှားအယွင်းများနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြောင်းလူသိများလာသည်။ အမှားတည်ရှိနေသည် ...
AmayaOS 0.08 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
AmayaOS သည် UNIX ကဲ့သို့သော Operating System တစ်ခုဖြစ်ပြီး GNU / Linux ပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ပဲအထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာများဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သို့ဆိုလျှင် CentOS7ကိုမည်သို့ထင်ဟပ်ပြနိုင်မည်နည်း။ ဤအရာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ အကြား…
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်နာမည်ကြီး Distro, Linux Mint, ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါရိုက်တာကကြေငြာခဲ့သည် ...
Archlinux တွင် dnscrypt-proxy + dnsmasq ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း
နိဒါန်း - dnscrypt-proxy ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ - DNSCrypt သည်အသုံးပြုသူနှင့် DNS resolution အကြား DNS အသွားအလာကိုစာဝှက်ပြီးစစ်မှန်ကြောင်းတားဆီးသည်။
Maru OS ။ Android နဲ့ Debian၊
Ubuntu မှ၎င်း၏တက်ဘလက်အသစ်များအတွက်ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းကိုယခင်ကပြောခဲ့ဖူးသည်။ အသုံးပြုသူများမျှော်လင့်ထားသည့် Convergence ...
ရရှိနိုင် Korora 23!
ကျော်ကြားတဲ့ Fedora, Korora, ဟာသူ့ရဲ့ ၂၃ ကြိမ်မြောက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပါပြီ။ စတင်ပြီးသုံးလအကြာတွင် ...
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Slackware 14.2 beta ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အများဆုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Linux Deepin OS 15 လှပပြီးအသုံးဝင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Deepin 15 OS ကိုအပြီးသတ်အသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောစနစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
Linux Mint 17.3 "ပန်းရောင်" နှင့်၎င်း၏သတင်း
Linux Mint သည်အသိုင်းအဝိုင်းအများစု၏ ဦး စားပေးမှုကိုအနိုင်ယူနိုင်သည့်ဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိပ်ဆုံး ၁၀ - ၂၀၁၅ ၏ Linux ဖြန့်ဖြူးမှု
၂၀၁၆ ကိုစတင်နိုင်ရန် ၂၀၁၅ သည် Linux အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မည်မျှကောင်းသည်ကိုသတိရသင့်သည်။
Solus 1.0 OS သည်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် GNU / Linux distro
SoluOS ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အကြာတွင် Ius Doherty (Solus 1.0 OS နောက်ကွယ်မှတူညီသော) သည်မနှစ် ...
သီးခြားစီအားဖြင့် Qubes OS နှင့်၎င်း၏လုံခြုံရေး
ဟက်ကာများ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်ရှုပ်ထွေးသော malware များသည်ကွန်ပျူတာမှထုတ်လွှင့်သောဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
Archlinux ကိုတပ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၌အရာအားလုံးရှိစေရန်ထည့်ထားသော package များကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှထွက်ခွာလာသည်။
Linux ကျောင်းများ - အခြေခံပညာအခမဲ့ဆော့ဝဲ
Escuelas Linux ဆိုသည်မှာပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကို အသုံးပြု၍ ပရိုဖိုင်အောက်တွင်ဖန်တီးထားသောဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည် လား
ရရှိနိုင် Red Hat လုပ်ငန်း Linux ကို 7.2
Red Hat ဗားရှင်း 7.2 ကိုယခုအခါရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်၊ ဗားရှင်းကိုနိုဝင်ဘာလလယ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ...
GECOS Suite သည် operating system တစ်ခုပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အလုပ်အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုပေါင်းထည့်သည်။
Nova၊ ကျူးဘားတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း
Nova သည်ကျူးဘားရှိသိပ္ပံတက္ကသိုလ် (UCI) မှဖန်တီးသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံ ...
OpenSUSE Leap ၄၂.၁: ပထမဆုံး“ Hybrid” ဖြန့်ဖြူးခြင်း
တည်ငြိမ်သော openSUSE ဖြန့်ချိမှုများကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာတွင် ...
Fedora version 23 မှာပါ။
Fedora 23 သည်အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
Linux ဖြန့်ဝေမှုကမ္ဘာသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ developer အမြောက်အများ ...
ReactOS, Windows ၏ Open Source ဗားရှင်း
Open Source operating system အကြောင်းပြောသောအခါတွင်အသုံးများဆုံးမှာ Linux သည်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
နက်ရှိုင်းသောဝက် (ဘ်) ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုစနစ်
ကွန်ပျူတာစကြာ ၀ aboutာအကြောင်းအနည်းငယ်သာသိသူတိုင်းသိကြသည့်အတိုင်း Linux သည်အလွန်လုံခြုံသော operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။
Wily Werewolf, Ubuntu 15.10 ၏ version သည် Linux ကိုလူကြိုက်များစေသည်
Linux သည်ထိုနေရာတွင်အလုံခြုံဆုံး operating system ဖြစ်သော်လည်းအတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း ...
Manjaro ကိုမစမ်းခဲ့တဲ့သူတွေလုပ်သင့်တယ်။ မကြာသေးမီကအဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်း ...
ရရှိနိုင်သော Tanglu 3
မီးဖိုထဲမှ Tanglu3"Chromodoris" သည် Mathias Klumpp မှ Debian စမ်းသပ်မှုအခြေပြု distro ဖြစ်သည်။ ဒီဟာက ...
Kali Linux သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစုံဖြစ်သည်
ယေဘူယျအားဖြင့် GNU / Linux ဂေဟစနစ်သည်ဘက်စုံသုံးမှုရှိပြီးအသုံးပြုမှုမှအလုပ်များစွာသို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရရှိနိုင် Manjaro သစ်ကြံပိုး 0.8.13
သူတို့ကထပ်လုပ်ပါပြီ သစ်ကြံပိုးနှင့်အတူဤအချိန်။ Manjaro Linux အဖွဲ့သည် desktop တစ်ခုထပ်မံဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်။
ရရှိနိုင် Mageia 5
တစ်နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင် Mageia ဗားရှင်းအသစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းများထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ ၎င်း၏အဓိကအသစ်အဆန်း ...
နှုတ်ဆက်ပါတယ် Mandriva, မင်္ဂလာပါ Fedora 22
မနေ့ကကျွန်တော်တို့သိလိုက်တာက Mandriva, ကုမ္ပဏီပိတ်တော့တာပဲ။ ငါ twitter နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးဖတ်ဖူးတယ်။
Debian 8 Jessie လွတ်ပြီ
နယူးယောက်၊ ၂၀၁၅ Saturdayပြီ ၂၅ ရက်၊ စနေနေ့၊ someပြီ ၂၅ ရက်၊
Linux တွင်ကစားရန် Windows ဂိမ်းများကိုကစားရန် Wine, Playonlinux နှင့်များစွာသောအရာများထည့်သွင်းရမည်ကို ...
၂ Debian တိုသောသတင်း
တစ်ဖက်တွင်၊ မကြာသေးမီလများအတွင်းအငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်နည်းပညာကော်မတီကသူ့ကိုကြိုဆိုခဲ့သည် ...
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း: Crunchbang ++, Bunsen Labs နှင့် Bodhi Linux 3.0.0
ငါ Crunchbang ဖွံ့ဖြိုးဆဲရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးငါလပေါင်းများစွာကပယ်ထားပါတယ်။ ခက်ခဲတယ်…
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - OS Beta 1 ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
Ikey Doherty သည်အလွန်တက်ကြွသော Linux Mint ပြုစုသူဖြစ်သည်။ အထူးသ LMDE, သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝေးပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ...
Gentoo ။ ဒဏ္myာရီနောက်ကွယ်မှအမှန်တရား
Gentoo သည် Linux နှင့် BSD ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းကရေတွက်ခဲ့သည်။
Debian Jessie: အေးခဲပြီးရင်သုံးပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့အပြည့်အဝပြန်လာနိုင်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောပြရန်လာပါသည်
Tanglu 2.0 « Bartholomea »ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Tianlu ၏မူကွဲအသစ်၊ Debian Testing ကိုအခြေခံသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Fedora 21 ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်အတွက်အကြံပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည်။
Slackware 14.1: စပိန်ဘာသာဖြင့် Mozilla Firefox စပိန်စကားပြောသစ်သုံးစွဲသူများအတွက်နည်းနည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Chromixium: Xubuntu မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ ChromeOS
Chromixium သည်သမားရိုးကျ GNU / Linux desktop ပေါ်တွင် Google ၏ Chrome OS ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အသွင်အပြင်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
Systemd မုန်းသူတို့အတွက် Manjaro isos အပေါ် OpenRC
Manjaro Community သည် ISOd အများအပြားကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့သည် Systemd ကို init အဖြစ်အသုံးမပြုသောကြောင့် Gentoo အသုံးပြုသည့် OpenRC စနစ်ဖြစ်သည်။
[ဟာသ…သို့မဟုတ်သိပ်မများ] Debian တွင်လှေကားထစ်များ - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု (အပိုင်း ၁)
သူတို့က inits မျိုးစုံကိုထောက်ပံ့သင့်သလားဆိုတာ Debian ရဲ့ရွေးချယ်မှု parody ကိုတင်ထားတယ်
Linux Mint 17.1 Cinnamon RC ရရှိနိုင်တယ်၊ ဘာအသစ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်
Linux Mint 17.1 Cinnamon RC သည်ယခုအခါ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းများစွာနှင့်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာသူတွေကိုပြသပါ။
ကိုနို - ကလေးငယ်များကိုကွန်ပျူတာများကိုနဂိုနည်းအတိုင်းချဉ်းကပ်စေခြင်း
Kano သည်အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးသောကွန်ပျူတာနှင့်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများကို Kit မှပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ပိုမိုနီးကပ်လာစေမည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Debian Jessie အေးခဲပြီးပစ္စည်းပစ္စယ
Debian Jessie freeze အကြောင်းသတင်းတို။
openSUSE 13.2 ကိုယခုရပြီ၊ ဤ post တွင်၎င်းကိုအလွန်ကောင်းမွန်သော post-installation လမ်းညွှန်ဖြင့်မည်သို့ download နှင့် configure လုပ်ရမည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
openSUSE Tumbleweed အသစ်သည်ကူးယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်းယခု Rolling Release version တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်၊ မည်သို့ပြင်ဆင်မည်၊
Trisquel 7.0 နှင့် OpenSuse 13.2 ။ မီးဖိုထဲကနှစ်ခု။
OpenSuse 13.2 နှင့် Trisquel 7.0 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
OpenSuse စက်ရုံ - ထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ OpenSuse စက်ရုံဖြန့်ဖြူးမှုကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အဆင်သင့်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြသသည်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။ ဒီမှာပြောမယ်
ပြန်လည်သုံးသပ် - လတ်တလောလူများအတွက် Ubuntu Mate Beta 2၊
Ubuntu Mate Beta2ကိုကြည့်ပြီး၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များအပြင်အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသပါသည်။
Debian သည် Gnome သို့ပြန်သွားသည်
Debian Jessie သည်မူလ desktop အဖြစ် GNOME သို့ပြန်သွားပါလိမ့်မည်။
AmayaOS 0.06 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
AmayaOS သည် UNIX ကဲ့သို့သော operating system သည် 75MHz Pentium I နှင့် 16MiB RAM တို့တွင်မြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
Antergos: Arch အသုံးပြုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသောဖြန့်ဖြူးခြင်း
Antergos သည် ArchLinux အတွက်ဖြစ်ပြီး Linux Mint သည် Ubuntu အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ArchLinux ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
Bodhi Linux ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်
Bodhi Linux ကို ဦး ဆောင်တီထွင်ထုတ်လုပ်သူ Jeff Hoogland ကသူသည်ဘေးဖယ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Porteus - အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကောင်းသည့်အိတ်ဆောင် Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း (-300 mb)
Porteus သည်လျင်မြန်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Linux ဖြန့်ဝေမှုအုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Linux Mint Debian Edition သည် Debian Testing ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး Stable ပေါ်တွင်အခြေခံလိမ့်မည်
Linux Mint အဖွဲ့ကသူသည်၎င်း၏ Linux Mint Debian Edition version ကို Debian ၏ Testing branch ၌အခြေခံပြီးရပ်ဆိုင်းပြီး Stable သို့ပြောင်းမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
openSUSE စက်ရုံ - အသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
၎င်းကိုတရား ၀ င်ဖြန့်ချိခြင်းမရှိသေးသော်လည်း Centos7ကိုယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်နှစ်သက်သောသင်၏ download link များကိုထားခဲ့ပါ။
Manjaro Fluxbox: Community Edition 0.8.10 စတင်ရန်
Manjaro Fluxbox ကိုအရည်အသွေးကောင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၊ ဂရပ်ဖစ်စတင်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး themes အသစ်များကိုဖန်တီးထားသည်။
သုံးစွဲသူများအား Linux နှင့်စတင်ခါစကူညီရန် Linux Mint 17 Post-Installation လမ်းညွှန်။
Numix ၏စီမံကိန်းကြောင့် Antergos 2014.05.26 သည် Desktop Environments ၏အနံ့အရသာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သောပြားချပ်ချပ်ပြီးအလွန်ဂရုစိုက်သောအနုပညာလက်ရာများနှင့်အတူသတင်းများပါ ၀ င်သည်။
Ubuntu အတွက်သစ်ကြံပိုး - သင့်တည်ငြိမ်သော PPA ကိုနှုတ်ဆက်သည်
Ubuntu အတွက်သစ်ကြံပိုးတည်ငြိမ်တဲ့ PPA ကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် Chakra Linux Descartes ကိုရနိုင်သည်
Chakra Linux Descartes သည်လှပပြီးကြည့်ကောင်းသည့် Pro-KDE ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုယခုရရှိနိုင်သည်။ သင့်ကိုအကြံဥာဏ်အချို့ပေးပါတယ်။
Plasma Next: အနာဂတ် KDE မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာစစ်ဆေးခြင်း
Neon ပရောဂျက်၏ ISO ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး Plasma Next သည်မည်ကဲ့သို့ပုံဖော်မည်၊ သူတို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုပြသည်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ထင်မြင်ထားခဲ့ပါ။
Wayland သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Fedora 21 တွင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်
Wayland သည် Gnome နှင့်အတူ Fedora 21 တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
Lubuntu 14.04: ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမင်းပြောပြမယ်
ငါအိမ်မှာရှိသည့်ကွန်ပျူတာဟောင်းတစ်လုံး၌ Lubuntu 14.04 နှင့်ကြုံခဲ့ရသည့်အတွေ့အကြုံများကိုသင့်အားမျှဝေချင်ပါသည်။ ငါ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရဲ့ရလဒ်က ...
UbuntuStudio နှင့် Edubuntu - သူစိမ်းနှစ်ယောက်
Ubuntu ၏အရသာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုသောအခါ Kubuntu, Xubuntu နှင့် UbuntuStudio နှင့် Edubuntu ကဲ့သို့သောအခြားမူကွဲများကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
Mageia 4: ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တစ် ဦး distro
ငါ့အတွေ့အကြုံအရငါ Mageia distro ကိုစတင်ခံစားကတည်းကခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးပြီးပြည့်စုံသည်ဟုဆိုရမည်။ ဘာကြောင့်လဲကြည့်ရအောင်။
Xubuntu - သာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံ
Xubuntu အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှပေးသည်။ ဒီဖြန့်ဖြူးမှုမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြချက်၊ အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကြည့်ရအောင်။
Ubuntu 14.04: ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်, စားသုံးမှု, အသွင်အပြင်နှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Ubuntu 14.04 ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ သုံးစွဲမှု၊ ပုံပန်းသဏ္andာန်နှင့်အသုံးဝင်မှုရှိမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ရလဒ်အတော်လေးလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Xubuntu 14 တွင်တွေ့ရမည့်သွင်ပြင်အသစ် ၁၄ ခု
Sean Davis ၏ဘလော့ဂ်တွင် Xubuntu တွင်လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ် ၁၄ ခုကိုပြသရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Android 4.4 ကို Install လုပ်နည်း
Android-x86 ဆိုသည်မှာ netbook များ၊ laptop များနှင့်အခြားမည်သည့်နေရာများတွင်မဆို Android patching ကိုအာရုံစိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
arkOS: သင်၏ "သီးသန့်" မိုcloud်းတိမ်
Raspberry Pi သည်နည်းပညာဈေးကွက်တွင်တော်လှန်ရေးကိုဆိုလိုသည်။
ရရှိနိုင် Community Edition Manjaro Fluxbox 0.8.9-1
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Community edition Manjaro Fluxbox 0.8.9-1 ၏စတင်ထုတ်လွှင့်မှုအသစ်ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားပေးနိုင်သောကြောင့်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။
Windows XP မှ Linux သို့ပြောင်းရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
Microsoft မှXPပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် Windows XP အားထောက်ပံ့မှုကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအာဂျင်တီးနားတွင်နေထိုင်သောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်အားအကြံပေးနိုင်မည့်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်မေးသည်။
ခုနစ်လအကြာ ... Fedora နဲ့ embargo တွေရှိတဲ့နိုင်ငံများ၊
တစ်ချိန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ခံစားခဲ့ရသောနိုင်ငံများအတွက် Fedora ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။
အသစ်ကအနုပညာလက်ရာများနှင့်အတူ KaOS 2014.03 ရရှိနိုင်ပါသည်
KaOS သည်အသစ်သော package များပါ ၀ င်သော version အသစ် (သို့) ISO အသစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
LMDE မှ Habemus Tanglu 1.0, Manjaro 0.8.9 နှင့် RC
Evolve OS: Ikey Doherty ၏နောက်ထပ်စီမံကိန်း
Ikey Doherty ကဘာကြောင့်ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးကိုထားခဲ့တာလဲဆိုတာကတော့မရှင်းသေးပါဘူး။
[ဟာသ] Systemd နှင့် Upstart, Debian အပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့သည်
ချစ်ခင်ရပါသော Linux သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Systemd နှင့် Upstart တို့၏တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန်ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်အတွက်အဆင်သင့်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။
ရရှိနိုင် Mageia 4
မနေ့ကမှစပြီးဒီ Mandriva မျိုးဆက်ရဲ့စတုတ္ထမြောက် version ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ။
ရရှိနိုင်သော KaOS ISO 2014.01 တည်ငြိမ်သော
အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ပြီး update လုပ်ထားသော Yoyo308 ၏လက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်လွှတ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ (မည်သူ?) ကိုရရှိသည်။
PearOS တည်ဆောက်သူ David Tavares မှထုတ်ပြန်ချက်။ Rosa Guillénဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသော၊ Yoyo Pear OS နှင့် Pear Cloud တို့ဖြင့်စုစည်းထားသော ...
Linux Mint 16 နှင့်အသေးစားထင်ဟပ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်အရ Linux Mint ကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါမည်။
Windows နှင့် Mac တို့နှင့်မတူသည်မှာ Linux တွင်ကွဲပြားသော graphical environments နှင့် applications များအသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးခြင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။
LFS (Linux From Scratch) ကိုဘာသာပြန်ဖို့ရည်မှန်းထားသလား။
Linux From Scratch သည်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် GNU / Linux စနစ်ကိုတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကသဘာဝပဲ ...
CentOS: Red Hat မှကူညီသည် (နှင့်လူထု)
အတိုချုပ်နှင့်ရိုးရှင်းသောဗားရှင်း - Fayerwayer - « Linux world သည်အေးခဲသွားပြီး Red Hat သည်၎င်း၏ Clone « CentOS »ကိုကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ဒီလမှာကျွန်တော့်ရဲ့ PC နဲ့ distro laptop ပေါ်မှာတော်တော်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လတစ်လရှိခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါရဲဘော်ရဲဘက်၊ မင်းကဒီဇင်ဘာလကောင်းတဲ့လကိုမျှော်လင့်မိတယ် သင်သိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Yoyo Fernández ...
Kubuntu ကဘာလဲ? Kubuntu သည် KDE ကို desktop environment အဖြစ်အသုံးပြုသော Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအပြာရောင်စနစ်များဖြင့်တီထွင်သည်။
Xubuntu ဆိုတာဘာလဲ။ Xubuntu သည်ကျော်ကြားသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း Ubuntu ၏ 'အရသာ' တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်နာမည်လိုပဲ ...
PearOS 8 သုံးသပ်ချက် (ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက် + မျက်နှာပြင်များ)
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောအချိန်က (သိပ်မကြာပါဘူး) PearOS 8 သည် MacOS ကဲ့သို့သောစတိုင်သည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Linux တွင်အသစ်ဖြစ်နေလျှင် Ubuntu ကိုစမ်းသပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။
စံပြ Distro ကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်၏စာရွက်
စံပြ Distro သည်သင်ဘယ်တော့မှရှာ။ မတွေ့နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်ရှာမတွေ့ပါ။ သငျသညျအားလုံးသိရန်ရနိုင် ...
desdelinux.net မှသူငယ်ချင်းများ။ ကျွန်ုပ်၏ desktop PC များနှင့် laptop များတွင်အစားထိုးနေသည့် Fedora ကို XFCE နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
Manjaro Linux နဲ့တစ်လ
အားလုံးစာဖတ်သူများမှမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ငါနှင့်အတူငါ့အတှေ့အကွုံမြားအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်သေးငယ်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲ, မှလာ ...
SolusOS သေပြီ၊ သို့သော် Tanglu သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်ုပ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအခြားစီမံကိန်းများမှာ ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည်။
SolusOS ၏သေခြင်းအတွက် Coplas de Diazepan
ငါဆောင်းပါးစတင်သောအခါပြtheနာကိုအဘယ်မှလာ။ G + မှတစ်ဆင့် ElementaryOS စီမံကိန်း၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Daniel Foréက ...
Ubuntu 13.10 တစ်ခြားထုတ်လုပ်မှုလား။
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများမျှော်လင့်သောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဲဒါ ... လား
တိုးတက်မှုအချို့နှင့်အတူ Xubuntu Saucy Salamander Beta2ကိုရရှိနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်သည် Xfce သုံးစွဲသူမဟုတ်တော့သော်လည်း Xubuntu သည်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရပါမည်။
Dax OS 2.0.2 ကို ၄ င်း၏အရသာလေးမျိုးဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်
ယနေ့ခေတ် Dax OS ၏ဗားရှင်း 2.0.2 ကို၎င်း၏အရသာလေးမျိုး၊ Desktop, Kids, Life ... တွင်တစ်ခုစီဖြန့်ချိခဲ့သည်။
download လုပ်ရန် Zentyal 3.2
Zentyal (ယခင်က Ebox ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်၎င်း၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများကြောင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Consort Desktop အသစ်သည် QT ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
မင်္ဂလာပါ GNU / Linuxmaníacos, elruiz1993 သည်သင်လေ့လာသိရှိခဲ့သမျှကိုနောက်ဆုံးမှထပ်မံယူဆောင်လာသည်။ ဒီနေ့ ...
beta ကိုအဆင့်အတွက် Canaima4
ဘလော့၏စာဖတ်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာယေရှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် DesdeLinux အတွက်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးပို့စ်ဖြစ်သည်။ ယခုပင်လျှင်…
ရရှိနိုင် SolusOS2အာလဖ 9
SolusOS ကိုသတိရလား ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်အဲဒီအချိန်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုဟာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အထိပါပဲ။
Tanglu LiveCD ကိုစမ်းသပ်ရန်ရနိုင်သည်
Tanglu ကိုမှတ်မိလား၊ ငါဖြန့်ဝေတာကိုချိန်းတွေ့ခြင်းမရှိဘဲချစ်ခင်တွယ်တာတယ်။ တန်ဂလူသည်အခြေခံအားဖြင့်မူတည်သည်။
Dax OS Experimental - ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောဆန်းသစ်သော distro
Dax OS ကိုမသိသောသူများအတွက်မူ၎င်းသည် Ubuntu ကို အခြေခံ၍ ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောပါ။
eOS - ကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုရဲ့အစလား။
Ubuntu အခြေပြုဖြန့်ဝေမှုများတွင်ကိုယ်ပိုင်အလင်းရှိသည့်ကြယ်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒီစနစ်မှာအများကြီးရှိတယ်။
SolusOS2Alpha8: developer များနှင့်စမ်းသပ်သူများအတွက်ပထမ ISO
SolusOS2ကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးပြီးကတည်းကကြာခဲ့ပါပြီ။ မမှတ်မိသောသူများအတွက်, SolusOS သည်ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူခံထားရသောနိုင်ငံများရှိ Fedora ပြproblemနာ။
သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ SynFlag ကအထိခိုက်မခံတဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုသာကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်။ တတ်နိုင်သလောက်ကြားနေဖို့သူကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ...
ရရှိနိုင်ပါသည် ZevenOS Neptune 3.2
တစ်ကြိမ်မှာ Debian Wheezy ကိုအခြေပြုပြီးဖြန့်ဖြူးခဲ့တဲ့ ZevenOS Neptune အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီ။
Snowlinux ရေခဲမြစ် - နှင်းဖုံးသော Mint
ကျွန်တော့်လက်တော့ပ်အနားယူတော့မယ့်အချိန်မှာအဲဒါကိုစမ်းသပ်ကွင်းတစ်ခုအနေနဲ့သုံးပြီး distro တစ်ခုကိုသုံးချင်တယ်။
Manjaro အတွေ့အကြုံ - OpenBox နှင့် Pentium IV
ကောင်းပြီ ငါဒီမှာနိမ့်ဆုံးကွန်ပျူတာရှိသည့် GNU / Linux အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သတ်၍ အနည်းငယ်ပြောပြရန်ဤတွင်ရှိနေသည်။ အကျဉ်းချုပ် ...
ElementaryOS Stable: သွင်းခြင်း + သုံးသပ်ခြင်း
မနေ့က pandev92 ElementaryOS (ယခုမှ စ၍ eOS) အကြောင်းအလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
မူလတန်း Os Luna, နောက်ဆုံးတော့တည်ငြိမ်! ပြန်လည်သုံးသပ်
ကျွန်ုပ်သည်အမှိုက်များ မှလွဲ၍ အချို့သောအမှားများ မှလွဲ၍ ယနေ့အချိန်၌ Lubuntu ကိုအသုံးပြုနေသည်။
eOS site ပေါ်ရှိကောင်တာကျွန်ုပ်တို့တွင်တည်ငြိမ်သော version ရှိနှင့်ပြီလား။
ငါ EOS site (ElementaryOS ခေါ်) ကိုသာ ၀ င်ရောက်ပြီးရိုးရှင်းပြီးလှပသော (ရှာ။ မတွေ့နိုင်ပါ) ...
SolidXK: အကောင်းဆုံးအသစ် Linux အသစ်
Schoelje, ဒီ distro ၏အဓိကထိန်းသိမ်းသူ, ယခင်က Linux Mint ကို Debian ၏ "တရားမဝင်" ဗားရှင်းဖန်တီး Linux Mint အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ...
AMD part1 နှင့်အတူ Odyssey
စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေအကုန်လုံးကို PC ကို configure လုပ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောအရာတွေ၊ GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုတွေကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ အဖြစ် ...
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့နင်ငါ့ကို Debian ဆီကမှတ်ချက်ပေးတာကိုငါတွေ့ခဲ့ရတယ်။
Linux Mint 15“ Olivia” Xfce ကို download ရယူနိုင်သည်
Linux Mint Olivia ၏ရရှိနိုင်မှုကို version နှင့်အတူပါရှိသည့်၎င်း၏ Xfce ဗားရှင်းတွင်ကြေငြာခဲ့သည်။
အကယ်စင်စစ်လူအများတို့သည်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ရေးသားသူကိုတွေ့မြင်ပြီး Elav သည်တိုက်ခိုက်ရန်လာနေသည် ...
Arch Linux + KDE ထည့်သွင်းမှုမှတ်တမ်း - ခြားနားချက်များကိုသိခြင်း
မနေ့ကကျွန် at တော် popular ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံး GNU / Linux Rolling Release ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို I install လုပ်ခဲ့သည်။
Trisquel 6.0 LTS GNU / Linux: လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်လွတ်လပ်မှု
ငါ GNU / Linux အာကာသအတွင်းအကောင်းဆုံး distros များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုငါထင်သောအရာကိုယခုခဏလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကို ...
Fedora 19: အသေးစားပြန်လည်သုံးသပ်
သင်၏ desktop ကို Fedora နှင့်လွတ်ပါ။ Fedora သည်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်လည်ပတ်စေသောစနစ်ဖြစ်ပြီးမြန်ဆန်။ တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
Ubuntu ကိုသုံးခြင်းနှင့် Debian ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Sabayon နှင့် Sabayon ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သေးငယ်ပုံရသည်။
Ubuntu နှင့် Canaima တို့ကို browser မှစမ်းပါ
GNU / Linux သို့ရောက်လာသောအသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်၊ သူတို့ကိုနားလည်ရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသောအရာတစ်ခုမှာ ...
Webupd8 မှတစ်ဆင့် Ubuntu 12.12 ကိုအခြေခံထားသောတရုတ်ဖြန့်ချီရေး Linux Deepin 13.04 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
သတင်းအတွက်ချောကလက် - RHEL7သည်ဂန္ထ ၀ င်စားပွဲမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုမည်။
၎င်းသည်မကြာသေးမီက Red Hat Summit 2013 ဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ဗားရှင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအနည်းငယ်သာရှိသည်။
Linux Mint 15 "Olivia" ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် Linux Mint 15 « Olivia » RC ရရှိနိုင်မှုအကြောင်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ရရှိနိုင်ပါသည် ZevenOS Neptune 3.1
DesdeLinux ရှိ ZevenOS Neptune, Debian ကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူးသောယခုဖြန့်ချီချက်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြီးပါပြီ ...
Mageia3ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
ခေါင်းစဉ်အရမေလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၃ တတိယမြောက်ဗားရှင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Canaima ၏ပထမဆုံး Alpha4ရရှိနိုင်ပါသည်
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့် Gnu / Linux အသိုင်းအဝိုင်းရှိကျွန်ုပ်၏ညီအစ်ကိုများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ။ နည်းနည်းတော့လိမ့်မယ် ...
Linux Mint 15“ Olivia” RC ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည် Cinnamon 1.8 နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသောအပြောင်းအလဲများအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးယနေ့ Clem က၎င်းအတွက်ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
ငါထင်တာကတော့ Debian7က Gnome Shell ကိုကူညီခဲ့တယ်
လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာကအလုပ်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ငါ Debian ကိုသုံးခဲ့ရသည်။
မူလအတွေ့အကြုံ (Beta) ၂ - လက်စားချေခြင်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် elruiz1993 ဖြစ်ပါသည်။ Pantheon: The Elementary အတွေ့အကြုံနှင့် WiFi မည်သို့ရရှိနိုင်ပုံစသော Post Classic များအကြောင်းသင်သတိရကောင်းမှတ်မိလိမ့်မည်။
စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ရရှိနိုင်သော Debian လက်စွဲစာအုပ်
Debian developer များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သောRaphaël Hertzog သည် Debian အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ပင်မစာမျက်နှာတွင် ...
စာနယ်ဇင်းများ Paaaaaaaaaain ။ Debian 7.0 Wheezy ထုတ်ပြန်သည်
ဒီဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူဘာပါလဲ? * Apache 2.2.22 * Asterisk 1.8.13.1 * GIMP 2.8.2 * GNOME 3.4 *
Sabayon 13.04 နှင့် distro ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်အသစ်
သေးငယ်သောအရာနှစ်ခု - ပထမတစ်ခုမှာ Gentoo ပေါ်တွင်အခြေခံသော distro ဖြစ်သော Sabayon ၏ iso အသစ်ကိုလွှတ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ကြားသကဲ့သို့ Raring Ringtail နှင့် Mark Shuttleworth တို့စတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းကဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ။
စာလုံးချောချောမွေ့မွေ့ခြင်းနှင့် qtgtkstyle Opensuse 12.3
အကယ်စင်စစ်တစ်ယောက်ထက်ပိုသောအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်မှာ distros များတွင်ယေဘူယျအားဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့မဖြစ်သင့်ကြောင်း ...
Debian Wheezy ကိုမေလအစောပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိမည်
Neil McGovern က Debian developer များရဲ့ mailing list မှာကြေငြာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကိုရေးနေတုန်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေသိပြီးငါ့ကိုတော်တော်လေးထိမိခဲ့တယ်။ Fuduntu ကိုဖန်တီးသူ Andrew Wyatt ...
Manuel de la Fuente က Cinnarch နှင့် Manjaro နှစ် ဦး စလုံးသည် Cinnamon မှထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မည်သို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်ခွာသွားကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
သစ်ကြံပိုးသည်တစ်ယောက်တည်းကျန်ရှိဆဲဖြစ်သည်။ Manjaro သည်သူ၏ Desktop ဖြင့်သူ၏ထုတ်ဝေမှုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
မနေ့ကပြောခဲ့တာကတော့ Cinnarch ဟာ Arch Linux ကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူးတဲ့ desktop environment အဖြစ် Cinnamon ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Siduction: တပ်ဆင်ခြင်း, ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ငါ Debian ကိုသုံးတယ်၊ Debian ကိုငါချစ်တယ်။ ငါအာရုံစိုက်မိအောင်လုပ်ပေးတဲ့စီမံကိန်းသုံးခုရှိတယ်။ ငါတို့ပြောပြီးပြီ Tanglu, ZevenOS ...
Cinnarch က GNOME Shell အတွက်သစ်ကြံပိုးကိုစွန့်လွှတ်သည်
Cinnarch သည်နှစ်များအတွင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သော Arch Linux ကိုအခြေခံသည့် distros များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ...
Sabayon, အများဆုံးအသုံးပြုသူဖော်ရွေသော distro
Ubuntu မှလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်ကမှ စ၍ MPlayer နှင့် Compiz သည်ကျွန်ုပ်ကိုစပြီးထွက်ပြေးလာသည့်အတွက်ကြောင့် ...
ZevenOS Neptune - Debian စစ်ဆေးခြင်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဆိုပြုချက်
Neptune လို့လည်းလူသိများတဲ့ ZevenOS Neptune ဟာ Debian ကိုအခြေခံထားတဲ့ ZevenOS ရဲ့ရပ်ရွာအခြေပြုဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Debian Squeeze ကို Xfce desktop ဖြင့်တပ်ဆင်ပါ
hard drive (များ) ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်လည်ပတ်ရန်ကွဲပြားသောလည်ပတ်ရေးစနစ်နှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မအကြံပြုပါ။ ငါဆိုလိုတာကငါတကယ်သိရင် ...
ဘာကြောင့် Debian ကို desktop ပေါ်မှာသုံးရတာလဲ။
Debian အတွက်နှင့်အကြောင်းပြချက်များရှိပါသည်။ သို့သော်မျက်နှာသာအတွက်သူများကနေ ...
Debian Backports သည်အဓိကသိုလှောင်ရုံ (အဓိက) သို့ပေါင်းစည်းသည်။
Fedora 18 ကိုသွင်းပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ။
အချို့သူများသိကြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သည် Debian၊ CentOS နှင့်ရံဖန်ရံခါ openSUSE အသုံးပြုသူဖြစ်သည်။ ယခုငါ CentOS ကိုသုံးပြီးကတည်းကငါရှိသည် ...
ငါဝန်ခံတယ် မနေ့ကပဲတန်ဂluလို့ခေါ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းအသစ်အကြောင်းကျွန်တော်သိသွားပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ် (အလျင်အမြန်ပဲ) သို့သော် Tanglu ...
Tanglu: Debian အခြေပြုဖြန့်ဖြူးခြင်း
ခေါင်းစဉ်အရ Tanglu သည် Debian Testing ကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူးသောအသစ်ဖြစ်သည်။
ရရှိနိုင်သော Xubuntu 13.04 Beta 1
Xubuntu အဖွဲ့သည် Xubuntu 13.04 ဖြစ်သည့်ပထမဆုံး beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
openSUSE 12.3 + ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။
DesdeLinux မှသူငယ်ချင်းများ။ တရားဝင် openSUSE 12.3 ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီ post မှာတော့မင်းကိုပြမယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် CentOS9ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တရားဝင်ကြေညာချက်ကိုအောက်တွင် ...
Ubuntu၊ Fedora နှင့် Stuffy Distro တို့ဖြစ်သည်
Ubuntu 12.10 ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးပါက update လုပ်ထားသော Unity ဗားရှင်းကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းသည်တည်ငြိမ်ကြောင်းအတည်ပြုရန် (မရှိပါ ...
တရားဝင် LMDE KDE နှင့် Xfce ထုတ်ဝေမှုများကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ ငါ Schoelje သောအံ့သြဖွယ်အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ...
ဤဆောင်းပါးကိုတာရာဂါတွင်မိမိကိုယ်ကို petercheco ဟုခေါ်။ ၎င်းအားကျွန်ုပ်အားပြောခိုင်းသောအသုံးပြုသူမှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Chakra ISO Netinstall ကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Chakra ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ရပ်တန့်မသွားပါ။ အရာအားလုံးကိုချပြီးကြီးစွာသောအလုပ်ပြီးနောက် ...
Debian7အသစ်ကဘာလဲ?
ယနေ့ငါ Debian Installer ၏ RC စတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအကြောင်းပြောပြနေစဉ်ငါ link တစ်ခုသာတွေ့လိုက်ရသည်။
SolusOS 1.3 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
SolusOS အဖွဲ့သည် SolusOS Eveline 1.3 ထွက်ရှိမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုတင်းကြပ်စွာပြုပြင်ခြင်းလွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ...
Debian Installer 7.0 ကိုထုတ်ယူနိုင်သည့် Candidate 1 ကိုရနိုင်သည်
Debian 7.0 installer ၏ပထမဆုံး Release Candidate ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊